Barnaamijyada casho ee farta leefleeca: Maanta, Allrecipes Casho Wareegtada | Androidsis
Barnaamijyada cashada ee farbarashada farta: Maanta, Allrecipes Casho Spinner
Cristina Torres sawir-haye | | Codsiyada Android
Waxaan sii wadeynaa inaan kahadalno arjiyadaha codsiyada jikada ee qeybta Codsiyadeena qeybta cunada iyo leefashada farahaaga, kiiskan waxaa nooga tagay mid balan qaadaya inaan noqono wax walba oo adeegsade kasta oo jecel waxyaabaha la wadaago jecel yahay. Ayaa lagu magacaabay Allrecipes Casho Spinner, iyo in kastoo ay ku qoran tahay Ingiriis, waxay sheeganeysaa inay tahay mid ka mid ah uruurinta ugu badan ee cuntooyinka ku jira Google Play marka loo eego kuwa ay soo ururiyeen isticmaaleyaasha gaarka loo leeyahay. Sidaas darteed haddii aad jeceshahay inaad ka baxsato bogagga ugu caansan iyo buugaagta cuntada lagu kariyo, barnaamijkani wuxuu si sax ah adiga kugu noqon karaa. Maxaad leedahay Fiiri?
Xaaladdan gaarka ah, waxaan aragnaa in dalabku wuxuu la mid yahay kuwa ugu badan ee aan falanqeynay, gebi ahaanba bilaash ah Waxay leedahay shaqooyin badan oo aan ku aragnay kiisaska codsiyada kale, dabcan kiiskan, in kabadan kuwa kale, waxaan aragnaa sida qaybta bulshada ee barnaamijka runtii udhaxeeyo. Waxaad awoodi doontaa inaad isku dubbarido dhammaan waxyaabaha, iyo sidoo kale inaad la wadaagto cuntooyinka aad ugu jeceshahay warbaahinta bulshada aad ugu jeceshahay. Laakiin kiiskan, waa run in naqshadeynta ay aad uga casrisan tahay xaaladaha kale, taasna lafteedu waa dhibic aad u muhiim ah oo lagu daro. Marka haddii aad rabto inaad waxbadan ogaato, fiiro gaar ah u yeelo waxa aan kugu tusno khadadka soo socda.
Allrecipes Casho Spinner
Waxaad kala soo bixi kartaa arjiga xiriiriyaha hore, laakiin kahor, sida aan had iyo jeer ku sameyno qeybteenna Farriimaha farta ku fiiqaya barnaamijyada casho, waxaan falanqeyn doonaa waxa aan u maleyneyno inay yihiin astaamaha ugu xiisaha badan. Xaaladdan oo kale, naqshadeynta lafteeda, iyo sidoo kale qayb ka mid ah macluumaadka lagu daray mid kasta oo ka mid ah cuntada sida loogu daro xogta aasaasiga ah, waxay noqon doontaa waxa ugu badan ee soo jiita dareenkeena falanqaynta Allrecipes Casho Spinner.
1 Sanduuqa cuntada
2 Dheeraad ah oo ku jira cuntada
Sanduuqa wax lagu kariyo waxaad ku arki doontaa a xulashada cuntooyinka aad markaa ku diyaarin karto suxuuntaada iyo iskudhafyo aad ufiican Sawirkiisa ayaa la muujiyaa, markaa waxaa laga yaabaa haddii aadan fikrad badan ka haysan sida aad doonayso inay saxankaagu noqdo, ama sida loo soo bandhigo, waxaad ka heli doontaa ikhtiyaar wanaagsan miiskan weyn. Kadib, si toos ah sanduuqa, waxaad ku arki kartaa waxqabadka saxanka kiciyay, iyadoo lagu qiimeeyo xiddigaha diyaarinta lafteeda iyo waliba tirada dib u eegista ay heshay. Haddii aad ka mid tahay kuwa had iyo jeer ku kalsoon fikradda isticmaaleyaasha kale ee adiga oo kale ah, waxay noqon kartaa habka ugu fiican ee aad ku xulan karto kuwa laga yaabo inay ka sii fiicnaan karaan.
Dheeraad ah oo ku jira cuntada
Dhanka kale, liiska arjiga ee 'minimalist menu' waxaan ka helnaa taxane siyaado ah oo ka baxsan kan maaddooyinka, diyaarinta iyo qaabka karinta. Waxaa jira xog aad u faa'iido badan, sida waqtiga diyaarinta ama waqtiga ay ku qaadaneyso in la diyaar garoobo, iyo taas oo loola jeedo jikada. Waxaad sidoo kale heleysaa macluumaad la xiriira nafaqada, dib u eegista isticmaaleyaasha kale, iyo sawirro badan oo kaa caawin kara inaad saxanka ka aragto aragtiyo kale. Waxaan u maleynayaa in dareenkaas, dalabkeena jikada maanta waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran, waana mudan tahay in gacanta lagu hayo si aan uga dhigno midkeena Android iyo fursadaha badan ee jira ee wax lagu karsado Adoo jidka ag jooga, waxbadan baro Ingiriisiga maxaad u malayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada cashada ee farbarashada farta: Maanta, Allrecipes Casho Spinner
Samsung waxay diyaarineysaa isbeddello si ay u xalliso dhibaatooyinka dhaqaale
Sony wuxuu furayaa Sony Aquatech, oo ah dukaanka ugu horeeya ee biyaha hoostooda mara